रङ्गशाला – MySansar
–राजेन्द्र ज्ञवाली- *क्रिकेटलाई भलादमी खेल भनिन्छ। अनि त्यही खेलको राष्ट्रिय टोली देशको क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था विरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लनुलाई के भन्ने? पारसले कुरा बुझ्दाबुझ्दै किन फेरि आन्दोलनमा ओर्ले त? यहाँ पारसले त कुरा बुझेका हुन्। तर हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, अथवा बुझ्ने प्रयास गरेका छैनौँ। *सरकारले आफूले सक्दो लगानी गर्नु पर्छ। लगानी कुन रुपमा कसरी भइरहेको… Continue reading
– राजेन्द्र ज्ञवाली – त्यस दिन बिहानै सोमलाल मलाई उठाउन आएको थियो। म आँखा मिच्दै उसँगै बाहिर गएँ। उसले आफ्नो हत्केलामा मुस्किलले अटाएको कालो गोलो भकुण्डो देखाउँदै ‘खेल्न जाम’ भन्यो। म पनि १०–१५ दिनदेखि यस नयाँ खेलमा निकै रमाएको थिए। हात मुख धोएर उसँगै घर पछाडिको चउरमा पुग्दासम्म मैले थाहा पाइ सकेको थिएँ, उसको हातमा… Continue reading
-राजेन्द्र ज्ञवाली- २०५५ सालमा खेल पत्रकारका रुपमा काठमाडौंमा आएर काम सुरु गर्दा दिनहुँजसो लेखिने र देखिने नामहरू अहिले अखबारका पानाबाट बिलाइसकेका छन्। ती खेलाडीका स्थानमा नयाँ खेलाडीहरू स्थापित भइसकेका छन्। अहिलेका खेलाडीहरू पनि अझ नयाँ प्रतिभाबाट विस्थापित हुनेछन् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस तथ्यलाई सबै खेलाडीहरूले आत्मसात् गरेका छन्। खेल क्षेत्रमा हुने यो स्वाभाविक प्रकृयालाई… Continue reading
नेपालले जित्दा खुसीका आँसु झरे
Posted on March 17, 2014 March 17, 2014 by mysansar
-राजेन्द्र ज्ञवाली- जुन देशमा क्रिकेटको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भइ सकेको छैन, जुन देशमा खेलेकै भरमा खेलाडीको भविश्य सुनिश्चित हुने स्थिति आइसकेको छैन, जुन देशमा क्रिकेटको आन्तरिक स्वरुपको निर्माण समेत भइसकेको छैन – त्यस देशका युवाहरू खेलमा लाग्नु नै आफैमा अनौठो कुरा हो। त्यसमाथि विश्वकपसम्म पुगेर विजयी सुरुवात गर्नु कम्ति आश्चर्यको कुरा होइन। विश्वकपमा सहभागी सबै… Continue reading